Ny zaza faran'izay tanora mpiangaly rock rock Bono, ny hatsaran-tarehiny 24 taona Yves Hewson dia nanapa-kevitra ny hanao fihetsika hafahafa. Nolavina ny prelessnitsa tanora noho ny fisian'ny sary fitifirana amin'ny glaon'ny GQ.
Ny vokatry ny fanandramana feno fahasahiana dia mety ho hitan'ny mpamaky ny bokin'ny Oktobra ho an'ny lehilahy.
Kristen Stewart sy Blake Lively dia hiseho amin'ny sarimihetsika novokarin'i Woody Allen
Jennifer Lawrence miaraka amin'ny siramamy misy siramamy eo am-pelatanany dia nanakorontana ny "Oscar"
Tsara homarihina fa i Yves dia tsy zanakavavin'ny ray malaza, fa virjiny mahafatifaty tena tsara tarehy manana loko porcelain ary tsara tarehy. Na dia matoky aza izy fa misy "endrika tadidin'ny olona amin'ny fahitana voalohany".
Tsy vonona amin'ny fiainana kintana
Modely sy mpilalao sarimihetsika Yves Hewson no zanaka tanora indrindra ao amin'ny fianakaviana Bono (Paul David Hewson) sy ny vadiny Alison. Ao amin'ny takela-bolany ao amin'ny horonan-tsary "Spy Bridge", "Pretty Words", "Blood Ties".
Irlandka, izay nihalehibe tao amin'ny fianakavian'ny mozika malaza, dia tsy mihevitra fa vonona ny ho tonga kintana izy. Niaiky i Yves hoe: "Matahotra aho noho ny fahatsapana fa haingana na ho ela dia hanomboka hankasitraka ny tarehiko."
I Chad Michael Murray sy Sarah Remer dia tonga ray aman-dreny fanindroany
Star bachelorette ho fanomezam-boninahitra ny fanangonana vaovao nataon'i Victoria Beckham
Alyssa Milano mangataka ny hamerenana 10 tapitrisa dolara!
Ny biography of Al Pacino
Ny kintan'ny The Big Bang Theory Melissa Raush no lasa reny
Nikki Reed sy Pavel Priluchny
"Esterhazy" - resipe
Sehatry ny faritr'i Samara
Kitapo ho an'ny fonenana fahavaratra
Ny hatsikan'i Willy
Ahoana ny fomba hanesorana ny tsy fahazoana moka?
Ny biopsy renirano - izay rehetra tokony ho fantatrao momba ilay fianarana
Karazana bozaka ho an'ny mpandray anjara
26 Ny porofo fa singa mampidi-doza ny ankizivavy sy ny antoko
Rahoviana no hanao batisa zazakely aorian'ny nahaterahako aho?
Amblyopia amin'ny ankizy
Ny kôkômbra - ny toetra amam-panahy sy ny fanoherana
Zavatra manan-danja amin'ny entana any Windsor. Ho gaga ianao!
Akanjo avy amin'ny kitapo fako
Ny endriky ny vehivavy